बिहीबार कुन राशिका लागि कति लाभदायी ? पढ्नुस आजको राशिफल | Kantipath.com
बिहीबार कुन राशिका लागि कति लाभदायी ? पढ्नुस आजको राशिफल
आज मिति २०७६ साल वैशाख २६ गते। इश्वी सन् २०१९ मे ९ तारिख। शकसंवत् १९४१। परिधावी संवत्सर। उत्तरायण। वसन्त ऋतु। नेपाल संवत् ११३९ बछलाथ्व। वैशाख शुक्लपक्ष। पञ्चमी तिथि बिहीबार।
आज पनि समयले साथ दिनेछ समयको सदुपयोग गर्न पछि नपर्नु होला । गरेका अधिकाँश काम सफल हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । अपरान्ह पछिको समय विस्तारै प्रतिकुल हुनेछ । अनावस्यक खर्चमा वृद्धि हुनेछ । सहयोगी मित्र टाढा हुनेछन् । अरुका कुरालाई धेरै विश्वास नगर्नु होला ।
समय सुधारोन्मुख देखिन्छ तर कामले पूर्ण गति भने समाउने छैन । अपरान्ह पछि समयले थोरै साथ दिनेछ । कार्य लगनशिलता बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा विस्तारै सुधार आउनेछ । आफन्तबाट सहयोगको आसा धेरै नराख्नु होला । पढाईमा सामान्य सुधार आउनेछ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्छ ।
सामान्यतया दिन अनुकुल नै देखिन्छ । विना तयारी कुनै पनि क्षेत्रमा हात नहाल्नु होला । प्रयास र प्रयत्नहरु भने सफल हुनेछन् । गरेका प्राय काममा सफलता मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । वित्तिय कारोवार गर्दा सतर्क रहनु होला । नयाँ क्षेत्रमा लगानी नगर्नु होला ।
आजको दिन पनि अनुकुल देखिन्न । लगानी बढाउने काम नगर्नु होला । अरुको भर विश्वासमा मात्रै काम नगर्नु होला । व्यापार व्यवसायमा गरेको लगानी डुब्न सक्छ ध्यान दिनु होला । यात्रा कष्टपूर्ण हुनेछ । वैदेशिक क्षेत्र कमजोर देखिन्छ । पारिवारिक तनाव बढ्न सक्छ । घरमा बस्न मन लाग्ने छैन ।
ग्रह गोचर अनुकुल नै देखिन्छ । काम गर्ने जोश जागर घट्ने छैन । काम गर्दै जादा असम्भव देखिएका कुरा सम्भव हुनेछन् । राजनैतिक व्यक्तित्वबाट सहयोग मिल्नेछ । नोकरीमा पदोन्नति हुनसक्छ । नयाँ काम हात लाग्नेछन् । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । काममा ढिला सुस्ति भने नगर्नु होला ।
कसैलाई आश्वासन दिने काम नगर्नु होला आफैलाई घाटा हुनेछ । गरेका ६० प्रतिशत काममा सफलता मिल्नेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा अवसरको खोजी हुनेछ प्रयत्न गरेमा मिल्न सक्छ । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी बढ्नेछ । संचित धनलाई नचलाउनु होला । धन दिने काम पनि नगर्नु होला ।
अस्थिर मन लिएर कहि केहि नगर्नु होला । कामले गति लिने छैन । लगनशिलता बढाउनु होला । रोकिएका काम अगाडि बढ्ने छन् । अविश्वास हटेर जानेछ । कुनै कुराको निर्णय लिनु पूर्व तयारी र अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढ्नु होला । व्यापार व्यवसायमा विस्तारै सुधार आउनेछ ।
समय प्रतिकुल देखिन्छ काममा हेलचक्र्याई नगर्नु होला । नयाँ क्षेत्रमा लगानी नबढाउनु होला । परिश्रमको मुल्य पाईने छैन । लगानी अनुसारको प्रतिफल पाउन गाह्रो हुनेछ । कार्य शिथिलता बढ्ने देखिन्छ । जोखिम मोलेर काम नगर्नु होला । अरुको काममा समय बढि लगानी हुनेछ । दान दिनुपर्ला ।
समयमा गरेका काम सफल हुनेछन् । सहयोग लिएर काम गर्ने वातावरण मिल्ने छैन । अरुको भर धेरै नपर्नु होला । लगनशिल भई गरेका कामबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । लेनदेन कारोवार गर्दा सुरक्षित विधि अप्नाउनु होला । आयत निर्यात व्यापारबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । परिवारबाट टाढा बस्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
मायाँ मोहमा कुनै काम हुने छैन । अरुबाट तपाई माथि आर्थिक चलखेल बढि हुनसक्छ । मुद्धा मामिलामा जीत हुनेछ । दैनिक काम काज अगाडि बढ्नेछन् । नयाँ परिस्थितिको सृजना हुनेछ । प्रयत्न गरेमा नयाँ काम हात पार्न सकिनेछ । संघर्षबाट विचलित नहुनुहोला । प्रतिश्पर्धामा सफल हुनुहुनेछ ।
सोचे जस्तो कहि कतै हुने छैन । अन्योलमा परिनेछ । काममा साना साना समस्या आउने छन् । काम गर्ने सहज बातावरण बन्ने छैन । व्यापार व्यवसायबाट सोचे जस्तो लाभ लिन सकिने छैन । भय आतुरमा काम नगर्नु होला विग्रिने छन् । विरोधीको सामना गर्नु पर्ला । कार्य गोपनियता अप्नाई काम गर्नु होला ।
विश्वास,आशा र भरोसामा काम गर्नु मिथ्या हुनेछ । घरका समस्या सँग खेल्दा अवसर फुत्किने सम्भावना त्यत्ति कै देखिन्छ । होशियारी नगुमाउनु होला, आफ्नो ठाँउ अरुले लिन सक्छन् । काममा सहजीकरण गरिदिने कोहि हुने छैन । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । आस्थाका द्वार थोरै खुल्ने छन् ।
Previous Previous post: अध्यक्ष प्रचण्डले भने–‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सहयोग गर्नुहोस’
Next Next post: प्रधानमन्त्री ओली आज भियतनाम र कम्बोडिया जाने
आज सोमबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ ? पढ्नुस राशिफल
के भन्छ आज मंगलबार तपाईको भाग्य ? पढ्नुस आजको राशिफल